ल’कडाउनलाई खुकुलो पारौं, सेनालाइ सिमानामा कडाइ गर्न लगाउँ – Complete Nepali News Portal
ल’कडाउनलाई खुकुलो पारौं, सेनालाइ सिमानामा कडाइ गर्न लगाउँ
नेपाल सरकार यदि बलियो छ भने भारत संग जोडिएका सबैनाका दशगजा लगायतका आधा नाकामा पुर्ब देखि पश्चिम सम्म काडेतार लगाइयोस से’नालाई परिचलान गरियोस ताकि सिमा मिच्ने हिम्मत कस्को हुदो रहेछ त्यहि बेला देखिने छ। नेपालमा पनि कोरोना सं’क्रमित धेरै देखियो तर लकडाउन उलंघन गरि सि’मानाबाट आएर फ’सेकालाइ उद्दार पनि देखावटि सरह कुनै ठाउमा गरियो। अब प्रश्न आउँछ नेपालको सन्दर्भ के छ भने लक’डाउन थप्ने कि अब नगर्ने शिर्षकमा छ?।। म यो भन्न चाहन्छु कि सिमा र खुल्ला नाकाबाट प्रवेश गर्ने ती मानिसलाइ के भन्ने? सेना प्रहरीको दुख देख्नुभएको छ? हावा हुरि नभनि हेपा’ह र दबदबाको सिलसिलालाइ अ’न्त्य गर्न जनतामा पनि त्यो आ’ट छ त्यसको पालना गरौ।
हाम्रो देश सानो र ग’रिब देशको सुचिमा पर्छ। लकडाउनले गरिब जनता भोकभोकै मरिसके, औसधि समेत नपाउने जिल्लामा प्यास मेटाउन नसकेर त्यसै अपकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। आत्मबल बलियो बनाउ र अब म पनि बोल्छु कि लकडाउन हटाइनु नै पर्छ भन्ने अबधारणा बोकेर सबै जनताको मन म’स्तिष्कमा यि ज्ञा’न मिलोस । छिमेकी रास्ट्र भारतले पनि अन्तरास्ट्रिय उडान सुरु गरिसक्यो, युरोप अमेरिकामा खुकुलो बनाइसकेको छ आखिर किन र कसरी नेपालमा चाहिँ ल’कडाउन बढाउने ?
ती बिकशीत मुलुक्मा प्रबन्ध मिलाइएको छ, हाम्रो जस्तो जोडिएका सिमा भएका अरु पनि मुलु’क छ्न तर त्यहा कडाइ गरियो , कति ठाउँ सेनाले, नियम उलंघन छैन र त निरन्तरको प्रयासले आज उनिहरुको मुलुकमा लकडाउन र कोरोना निर्मुल भैसकेको छ। बिश्व बैं’क बाट अरबौको ऋण लिने गरेका छौ ताकी अहिले हाम्रो देश नेपालको अर्थिक ,अर्थतन्त्र आयश्रोतमा निकै गि’रावट आइसकेको छ ताकी पछी लकडाउन खुले पछि कर बड्ने लगायतका विभिन्न श्रोत घट्ने हुन्छ। गरिब जनता भोकभोकै छट्पटी सके पुरानै जस्तो दिन कहिले फर्किएला र आफ्नो रोजगार दैनिकी चलाउनेहरुलाइ थोरै भएपनी खान मि’लोस। दुरि कायम गरेर पनि मजाले कल कारखाना,बिधालय, कलेज सबै चलाउन स’किन्छ।
तसर्थ सेना नीति हाम्रो देशको छिमेकि मुलुक संग जोडिने बनाइयोस। जनताले एक रुपैयाँको पनि चललेट खान पाइएला कि नपाइएला भन्नेमा पुगिसकेका छन। सीप ज्ञान सिकेकालाइ अझै कति दिन सम्म थुने’र राख्ने?? यातना दिनु सरह होइन र यो। बास’मा अल्झिएको पाइन्ट जस्तो भएका छौ हामी न यता गए सुरक्षित छौ न उता गएनै?? रास्ट्रलाई सम्बोधन गर्दा हाम्रो स’रकार कमजोर नबनोस जनताको करको कुरा पनि बुझौ र आयश्रोतमा गिरावट आयो भने बिपन्न गाउँ मात्र उप’त्यकामा बस्ने सम्पुर्ण सर्बसाधरणलाई पनि आउने छ अब तलब कम भयो के खाने कहाँ जाने छटपटि रहन्छ। कोरोना भाइरसबाट बाच्न सकिन्छ र अब लकडाउनलाई होस पु’र्याएर खुकुलो बनाउन जरुरी छ। जे भनेको छ त्यो कुरा मानौ न एकचोटि।
प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुबैमा मेरो अ’नुरोध छ हाम्रो पनि नैसर्गिक अधिकार छ बाच्नलाई। स्वास्थ्य जस्तो संबेदनसिल कुरामा लापरबाही , सामाजिक दुरिको उलंघन जस्ता समसामयिक ज्ञान भएर पनि नअपनाउने भएकाले त आज यो परिस्थिति आएको छ। प्रतिनिधि सभामा संविधान संसोधन प्रस्ताब आज संसदमा बस्दै छ लि’पुलेख कालापानी र लिम्पियाधुरालाई पनि राख्ने कुरा चलेको छ। सरकार अब देशलाई निकै कडा अनुमोधनमा लानुपर्यो ताकि अब यसरी केहिले मानिसले मा’निस प्रती पनि भेदभाव, छुवा’छूत जस्ता प्रक्रियाले कसैको ज्यान गुम्यो त कसैको इ’ज्जत र आसुमा नै दा’ग लाग्यो।
सामान्य नबनौ एक्काइसौं सताब्दिमा आएर पनि दलित लगायत सम्पुर्ण मानिस बिचको यो चर्तिकला तुरुन्तै बन्द गराउन सफल पार्नुस। जनप्रतिनिधि भएर संसदमा बहस गरेर मात्र टुंगोमा पुगिदैन। ढुङ्गा फु’टाइन ढुङै चाहिन्छ तसर्थ जनता साथै सबै एकजुट रहौ कुनैपनि आडले माथी र तलबाट हामिलाइ बिचमा राखेर दुबै छिमेकी मुलुकले लात्ता नहानोस। यो हुन सक्ला भन्न बेर छैन। लकडाउनलाई पनि अब खुकुलो र मानिसले मानिसको मर्का बु’झिदियोस एक छाक के खानुभयो भनेर सोध्नुस।
सिमाना बिबादमा अब ए’कजुट भएर काडेतार र नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले यो अहिले हामिले भोगेको पापको पराकाष्ठा अन्त्य हुन्छ जब सम्म सरकारका दुबै पक्षले हस्ताक्षर ग’राउन जनता माथिको दमन सिमानामा दमन र अबको लक’डाउन आखिर कहिलेसम्म सहने उहि ला’टाले पापा हेरेको जस्तो भन्छौ नि यस्तै नहोस। आयश्रोत घट्न दिनुहुन्न जस्को कारणले आउने रकममा छेटछाट हुने पक्का छ।